गायकलाई अंगालो हालेको आरोपमा युवती गिरफ्तार ! — Paschimnews.com News From Nepal
पश्चिमन्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७५/४/१ गते
एक्काइसौँ शताब्दीको यो युगमा केही मुस्लिम देशहरु महिला अधिकारको क्षेत्रमा कति क्रूर छन् भन्ने कुरा साउदी अरबको पछिल्लो घटनाले पुष्टि गरेको छ । साउदी अरबमा हालै एकजना गायकलाई अंकमाल गरेको अभियोगमा एकजना महिला दर्शक पक्राउ परेकी छिन् ।
साउदीको पश्चिमी सहर तैफमा शुक्रबार यो घटना भएको हो । त्यहाँ लाइभ कन्सर्ट भैरहेको बेला प्रस्तुती दिइरहेका गायक माजिद अल मोहन्जितलाई एक महिलाले स्टेजमै गएर अंकमाल गरेकी थिइन् ।
त्यसपछि त्यहाँ उपस्थित महिला सुरक्षाकर्मीहरुले ती युवतीलाई तत्कालै पक्राउ गरे । ती युवतीलाई पुलिसको हिरासतमा राखिएको र उनीमाथि आपराधिक उत्पीडन सम्बन्धी कानूनका आधारमा सरकारी मुद्धा चलाइने बताइएको छ ।
स्मरण रहोस् साउदीमा महिलालाई सार्वजनिक स्थानमा आफ्नो परिवार बाहेकको पुरुषसँग भेट गर्न निषेध छ । मदिरा, पहिरन तथा महिलाका विषयमा निकै सख्त कानून रहेको साउदी अरबमा सार्वजनिक समारोहमा महिलाको उपस्थितिका विषयमा पछिल्लो समय केही लचकता अपनाउने प्रयास गरिएको छ ।
युवराज मोहम्मद बिन सलमानले गत वर्ष सुरु गरेको भिजन २०३० अन्तर्गत सुरु गरिएको सुधारमा सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक खर्चलाई बढाएर वार्षिक ६ प्रतिशतमा पूराइएको छ ।
महिलाहरुलाई पहिलोपटक फुटबल म्याच तथा कन्सर्ट हेर्न छुट दिइएको छ । गत डिसेम्बरमा पहिलोपटक साउदी अरबमा लेबनानी गायिका हिबा तावाजीको कन्सर्टको आयोजना गरिएको थियो । त्यो नै साउदीमा आयोजित पहिलो आधिकारिक महिला कन्सर्ट हो । एजेन्सी
मुसाले हजारौँ लिटर रक्सी पिएपछि…
गाँजा र सेक्सबीचको सम्बन्ध सुनेर तपाई अचम्म पर्नुहुनेछ !
कुकुरहरुलाई बुट लगाईदिन प्रहरीको सुझाव
श्रीमतीको उजुरीमा श्रीमान पक्राउ, रिहा भएपछि विमान चोरेर फर्किए र घरमा ठोक्काए